lulu: Happy birthday
at 12:32 AM Labels: Party
Happy Birthday to our sister Ma Ma Lu.
You're not 35; you're 18 with 17 years of experience.
From Wyne Taw Tar myar and Mon
kiki August 14, 2009 at 12:58 AM
HAPPY BIRTHDAY MA LU ! ! !
သက်တော် ၁၂၀ ရှည်စေသောဝ် ။
ကျန်းမာ ချမ်းသာ ပြီး ဘေးဘယာ ဝေးကွာစွာဖြင့်
ဘလောဂ်ဂါ မောင်နှမ များအား
လပြည့်ရိပ် August 14, 2009 at 1:50 AM
ပျော်ရွှင်သော မမလုမွေးနေ့မှသည် နှောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် မိသားစုနဲ့ ဘလောခ့်ဝိုင်းတော်သားများနဲ့ ပျော်ရွင်သောဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေ။
Khyl August 14, 2009 at 1:54 AM
happy birthday.... !!!!!!!!!!!!
မမိုး August 14, 2009 at 4:13 AM
လုလုရေ ၃၅နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှသည် နောင်မွေးနေ့ ပေါင်းများစွာကို ချစ်သောသူများနဲ့ အတူအောင်မြင်ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေကွယ်
စန္ဒကူး August 14, 2009 at 5:21 AM
ံHappy Birthday to you... Happy Birthday to you
Happy Birthday to Ma Ma Lu Lu...
ပျော်ရွှင်ပါစေ..စိတ်ချမ်းမြေ့ ကိုယ်ချမ်းသာ လိုအင်အ၀၀ပြည့်နိုင်ပါစေလို့ချစ်ကူးကူးဆုမွန်ခြွေ
Vista August 14, 2009 at 5:36 AM
Happy Birthday mama lu lu ...
မမရဲ.၃၅နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှသည် နောင်မွေးနေ့ ပေါင်းများစွာကို ချစ်သောသူအားလူံးနှင်.အတူအောင်မြင်ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ
khin oo may August 14, 2009 at 5:55 AM
မိုးကောင်းသူ August 14, 2009 at 6:58 AM
Happy Birthday, Ma Ma Lu.
Anonymous August 14, 2009 at 7:04 AM
Happy Birthday mama lu!
လသာည August 14, 2009 at 8:02 AM
subuueain August 14, 2009 at 9:06 AM
Happy Birthday မမလု။ ဘဝကိုပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ...
Ingyin August 14, 2009 at 9:47 AM
Happy Birthday Ma Ma Lu Lu
rose of sharon August 14, 2009 at 10:45 AM
Happy birthday dear Lu Lu.
:P August 14, 2009 at 3:31 PM
သုခုမလေဒီ August 14, 2009 at 5:51 PM
မွေးနေ့ ဆုတောင်းလာပေးပါတယ်။ မွေးနေ့ မှာ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေ။ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာကိုလည်း
မိုးလွင် August 14, 2009 at 6:56 PM
May you be fulfilled in every moment in your life with healthy, happy and wealthy.
Happy Birthday Ma Ma!! Wishing u all the best!
လုလု August 14, 2009 at 7:45 PM
လုလုရဲ့မွေးနေ့မှာ လာရောက်ပြီး ဆုမွန်ကောင်းခြွေပေးတဲ့ မောင်နှမများအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
တကယ်တမ်းမှာ လုလုက မောင်နှမတွေကို ပုံမှန် ဟင်းချက်ကျွေးဖြစ်တာလဲ မဟုတ်ဘူးနော်။ အားတဲ့အခါ ပြေးလာပြီး ဟင်းအသစ်လေးတွေ တင်ပေးလိုက်ရတာ၊ နောက်ပြီး မောင်နှမတွေအိမ်ကိုလည်း အလည်မရောက်ဖြစ်ဘူး။ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတာရော၊ အချိန်မရတာရောကြောင့်ပေါ့လေ။ ၀တ္တရားပျက်ကွက်မှုထဲမှာတော့ ထိပ်ဆုံးကပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မမောင်နှမတွေက ကျွန်မဆီကိုလာပြီး စီပုံးလေးမှာအော်သွားကြတယ်၊ ကော်မန့်လေးထဲမှာ ရေးပေးသွားကြတယ်။ အဲ့ဒါလေးတွေကို ဖတ်မိပြီး ကြည်နူးပီတိဖြစ်ရတာ။ ကျွန်မဘက်ကနေ ဘလော့ဂ်မရတဲ့အခါတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ၀ိုင်းတော်သားတွေက ကျွန်မက ကူးပြီး မေးလ်နဲ့ပို့ပေးတယ်။ အဲ့ဒီလိုဖတ်ရတာ။ ဒါလည်း ၀မ်းသာတာပဲ။ ၀ိုင်းတော်သားတွေကလည်း မမောမပန်းလုပ်ပေးတယ်။
ကျွန်မချစ်သောမောင်နှမများအားလုံးကို ကျွန်မ တတ်စွမ်းသမျှ အားထုတ်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ဟင်းလျာလေးတွေကို အမြဲတမ်း အချိန်ယူပြီး တင်ပေးပါမယ်နော်။
ကျွန်မဘက်က လစ်ဟင်းတာ၊ ပျက်ကွက်တာများရှိခဲ့ရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါနော်။
မြရွက်ဝေ August 15, 2009 at 4:19 PM
"Happy Birthday Ma Ma Lu"
ကျောပိုးအိတ် August 16, 2009 at 9:06 AM
မမလုရဲ့ မွေးနေ့ မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ တိုင်းကို အဆုံးမရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
သမီးတို့ ကိုလဲ ဒီလိုမျိုးများများချက်ကျွေးနိုင်ပါစေလို့ 